'हाम्रो चाहना नेतृत्व सच्चिनुपर्छ भन्ने हो' | नेपाली पब्लिक 'हाम्रो चाहना नेतृत्व सच्चिनुपर्छ भन्ने हो' | नेपाली पब्लिक
विद्यालयको निर्माणाधीन भवनमा आगजनी (फोटोफिचर) बहिरा कलाकार सुजल बमको ‘झिमझिम परेली’… गर्भपतन गराउँदा किशोरीको मृत्यु, प्रेमी पक्राउ ‘विद्युत् प्राधिकरणले सूचना लुकाएर अपराध गरेको… नेकपा विप्लवको भूमिगत सञ्जाल बागलुङकाे मनाङडाँडामा जिपले किच्दा बालकको मृत्यु करेसाबारी : स्वस्थ र सम्मुन्नत जीवनको…
‘हाम्रो चाहना नेतृत्व सच्चिनुपर्छ भन्ने हो’
धनराज वास्तविक २०७६, २७ असार शुक्रबार १९:०४
नेपाली राजनीतिक इतिहासका खास आन्दोलन र परिवर्तनहरूको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल हो– नेपाली कांग्रेस। प्रजातान्त्रिक समावादको डोरीमा बाँधिएर लाखौँ मानिसले आफ्नो जीवन समर्पण र बलिदान गरेका छन्।
कांग्रेसमा पार्टी नै सम्पूर्ण हो भनेर लागेका कैयन् कार्यकर्ता छन्। पछिल्लो समयमा कांग्रेस सडकदेखि संसदसम्म कमजोर हुँदै गएको जनमानसले देखाउँछ। कुनै समय नेपाली कांग्रेसको आमसभामा थेगिनसक्नु मानिसको उपस्थिति रहन्थ्यो। कांग्रेसले प्रभावशाली नेता नपाए पनि स्तरीय नेतृत्व भने पाएकै हो।
आजको कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरू पार्टी नेतृत्वको विरुद्धमा भेला गरिरहेका छन्। उनीहरू पार्टीको मुख्य नेतृत्व प्रभावशाली देखिरहेका छैनन्। नेतृत्वलाई सच्चिन आग्रह गरिहेका छन्। तर, पार्टी नेतृत्वले भने जिल्ला सभापतिका सुझावहरूको टेरपुच्छर लगाएको देखिँदैन।
त्यस्तै वर्तमान कांग्रेसको अवस्था, सरकारप्रतिको कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको धारणालगायतका विषयमा नेपाली पब्लिक डट कमका लागि धनराज वास्तविकले नेपाली कांग्रेस, जिल्ला कार्यसमिति कालिकोटका सभापति हर्षबहादुर बमसँग गरेको कुराकानी :
जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी सभापतिलाई गलाउन सक्नुभएन नि ?
– हामी (जिल्ला सभापति)ले पार्टी नेतृत्वलाई कुनै असहजता सिर्जना गर्ने गरी कुनै भेला र एकता गरेका छैनौँ। न त कुनै गुट निर्माण गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम नै गरेका छौँ। हामीले त कांग्रेस र पार्टीको नेतृत्वलाई परिमार्जित हुन आग्रह मात्र गरेका हौँ। हामीले संविधान, पार्टीको विधान र मुलुकको परिवर्तनअनुसार पार्टीको संघीय संरचना निर्माण गर्न र नेतृत्वलाई व्यावहारिक बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका हौँ, आगामी दिनमा पनि हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ।
हामीले संविधान, पार्टीको विधान र मुलुकको परिवर्तनअनुसार पार्टीको संघीय संरचना निर्माण गर्न र नेतृत्वलाई व्यावहारिक बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका हौँ, आगामी दिनमा पनि हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ।
समावेशी, आरक्षणको हकमा एउटै व्यक्ति नदोहोरिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोटको कुरामा प्रत्यक्ष कार्यकर्ताको मत ल्याएर आउनुपर्ने महासमितिको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
नेतृत्व परिवर्तन तपाईंहरूको माग वा चाहना होइन ?
– कुरा नेतृत्वको होइन, प्रवृत्तिको हो। कांग्रेसको नेतृत्व समस्या होइन, प्रवृत्ति बदल्न आवश्यक छ। कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा अवसर र नेता बन्ने प्रक्रियालाई आम कार्यकर्ताको हितमा बनाउन सक्नुपर्छ। आरक्षणको नाममा पहुँच हुनेहरूलाई नै पटकपटक अवसर दिने र पहुँच नहुने (जो काठमाडौँसम्म आएर नेतालाई भेट्न सक्दैनन्) लाई वास्ता नगर्ने हो भने पार्टीको हालत आजको भन्दा कमजोर बन्छ। नेतृत्व सच्चिनुपर्छ भन्ने हो।
२०७४ सालको निर्वाचनको हारबाट कांग्रेसले आफूलाई सुधार्न सकेन नि?
– पहिलो कुरा, पार्टीका केन्द्रीय सभापतिले यसका बारेमा उचित निर्णय, निर्देशन र जिम्मेवारी लिनुपर्छ। समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले गम्भीर भएर पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा पार्टीलाई मात्रै होइन, मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। कांग्रेस कमजोर बन्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्छ।
कांग्रेसबिना लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भन्नुहुन्छ, यति कमजोर कांग्रेसले लोकतन्त्रको कसरी रक्षा गर्न सक्ला ?
– कांग्रेस पूरै खत्तम भएर कमजोर भयो भनिएको होइन। कांग्रेसको जीवनमा आजको दिन अलि नसोचिएको हो। आगामी दिनमा यसलाई अरू पार्टीभन्दा राम्रो र हाम्रो पार्टी बनाउन तथा सवल र सक्षम बनाउनका लागि हामीले नेतृत्वलाई निरन्तर आह्वान गरिरहेका छौँ। संगठनलाई चुस्त गर्नुपर्छ। नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। अहिलेको चुनौतीको सामना गर्नका लागि कांग्रेस सुदृढ हुनैपर्छ। कांग्रेस सदृढ हुनका लागि कांग्रेसको केन्द्रीय नेता र नेतृत्व तयार हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू कमजोर हुनु भनेको पार्टी र व्यवस्थासमेत कमजोर हुनु हो। यसको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रीय नेतृत्व र पार्टीका सभापतिले लिनुपर्छ।
पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको अवस्थाप्रति जिल्ला सभापतिहरूको धारणा के हो ?
– कांग्रेसका प्रायः भ्रातृ संगठनको अवस्था दयनीय छ। नेतृत्वविहीन छ। इतिहासकै सबैभन्दा लज्जास्पद तरिकाले निर्वाचनमा हार्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा गुट निर्माण गरेर होइन कि एकजुट भएर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू कमजोर हुनु भनेको पार्टी र व्यवस्थासमेत कमजोर हुनु हो। यसको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रीय नेतृत्व र पार्टीका सभापतिले लिनुपर्छ। तत्काल महाधिवेशनमार्फत संगठनहरूको नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। भ्रातृ संगठन बलियो भएन भने पार्टी स्वतः कमजोर बन्छ।
पार्टीले चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोर्दासमेत नैतिक जिम्मेवारी नलिने नेतृत्वले संगठनका बारेमा यति चिन्ता गर्न सक्ला त ?
– पार्टी र मुलुकको अवस्थालाई लिएर नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्छ, अनि मात्रै नैतिक जिम्मेवार भएको मानिने भन्नेमा म सहमत छैन। तर, पार्टीलाई गतिशील, चलायमान र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नेतृत्व सचेत र सफल हुनैपर्छ। २०६४ सालमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला पनि पार्टीले हारेको थियो। मञ्चमा उभिएर भाषण गर्न उहाँको स्वास्थ्यले दिँदैन थियो।
तर, बमले मेची—काली अभियान सञ्चालन गरेर कांग्रेसलाई पुनः आफ्नो स्थानमा ल्याउने काम गर्नुभएको थियो। त्यस किसिमले वर्तमान सभापतिले काम गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा चुक्नुभएको छ। ढिलै भए पनि पार्टीले जागरण अभियान सञ्चालन गरेको छ।
आगामी दोस्रो चरणको अभियानअघि भ्रातृ संगठन र संघीय संरचना अनुसारको पार्टी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मैले सभापतिज्यूलाई भेटेर भनेको छु।
आगामी दोस्रो चरणको अभियानअघि भ्रातृ संगठन र संघीय संरचना अनुसारको पार्टी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मैले सभापतिज्यूलाई भेटेर भनेको छु। साउन महिनाभित्र बाँकी काम सभापतिले सक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
साउन महिनाभित्र सभापतिले पार्टीलाई संघीय संरचना प्रदान गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ ?
– राम्रो कामको जश लिने र नराम्रो कामको अपजश लिनबाट भाग्ने प्रवृत्ति देखियो भने नेतृत्वमा बसिरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन। राम्रो कामको जश लिनेले कमजोरीहरू पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। आफू पदमा बसेको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।
कांग्रेसको दयनीय अवस्थाप्रति दुःख लाग्दैन ?
– हामीले हाम्रो जीवन यही पार्टीमा लागेर बिताएका छौँ। पार्टी कमजोर बन्दा दुख्नु र बलियो हुँदा खुशी हुनु हाम्रो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कांग्रेस मुलुकको व्यवस्था र अवस्थाप्रति एकदम सजग हुनुपर्छ। कांग्रेस जीवन्त पार्टी हो। कांग्रेस देशमा रहन्छ। रहन आवश्यक छ।
आजको भन्दा कमजोर अवस्थाको कांग्रेस रहन्छ कि बलियो भएर रहन्छ ?
– कांग्रेसलाई बलियो बनाउने या कमजोर बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्व र पार्टी कार्यकर्ताको कार्यसम्पादनमा भर पर्छ। नेताहरू प्रभावशाली र बलियो भएर मात्र कांग्रेस पार्टी रहेको होइन। पार्टीको आदर्श, विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यता समाजवादी छ। समाजका लागि उपयुक्त छ। बाँकी दिनमा पार्टीले आफ्नो कार्यसम्पादन सच्याउने छ। जनपक्षीय र कार्यकर्ताको हितमा काम गर्नेछ र पार्टीलाई आजको भन्दा बलियो बनाउनेछ।
सरकारका क्रियाकलापलाई तपाईंले कसरी लिइरहनुभएको छ ?
– केन्द्रदेखि स्थानीय तहको सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ। विकासको नाममा असारे भेलमा पैसा बगाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
सरकारको विरुद्धमा राजपासँग कांग्रेसले कार्यगत एकता गरेको छ, यो ठीक हो ?
– सरकारलाई मुलुकको व्यवस्थाभित्र रहेर जनताको अवस्थाप्रति सचेत गराउनु प्रतिपक्षको धर्म र कर्तव्य दुवै हो। सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा छ। यस अभियानमा कोही जोडिने र साथ दिने कुरा स्वाभाविक छ।
वर्तमान कांग्रेसको अवस्था
चीनको नान्जिङ सहर : सांस्कृतिक…
रोशी पुल २ महिनामै भासियो,…
२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार १४:०६